Sida loo sameeyo calammo dhaqaaqa Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | Design Graphic, Photoshop, Tababarada
Maanta waxaan dhammeyn doonnaa casharrada fiidiyowga ee fudud oo aan ku sameynay banner, iyo halka aan ku baranay sida loo isticmaalo Qalabka waqtiga si loo sameeyo isku xigxiga sawirada oo fudud oo wax ku ool ah.
Intii aad ku jirtay barashada fiidiyowga ee kor ku xusan, Video-Tutorial: Sida loo sameeyo boodh dhaqaaqaya Photoshop si fudud, waxaan ku aragnay sida loo sameeyo halabuur fudud oo sawir leh oo laga soo dejiyey internetka iyo xoogaa qoraal ah, qoraalkii maanta, Sida loo sameeyo banner dhaqaaqa Photoshop si fudud (gabagabo), aan animation siinno halabuurkaas.
Waxaan fureynaa feylka ka yimid tababarkii hore ee fiidiyowga.
Aynu aadno palette Layers.
Waxaan damineynaa muujinta dhammaan lakabyada marka laga reebo lakabka asalka ah, oo xaaladdan ay ku hoos jiri doonto asalka madow.
Waxaan tagnaa wadada Daaqada- Waqtiga.
Daaqadani waa seencer fudud taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan isku xigxigno sawirada lakabyada ka kooban feylkeena, oo markaa aan siino dareen ah dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonida ku socota calankeena. Waxaan ku soconeynaa calamadeena.
Waxaan ku bilownay sidii aan horeyba u sheegnay barta 3, iyadoo muuqaalada dhammaan lakabyada la damiyey marka laga reebo lakabka asalka.
Horaba daaqada Qalabka waqtiga, waxaan aadeynaa sanduuqa koowaad ee taxanaha. Waa midka kaliya ee hada banaanka jooga waxayna ku yeelan doontaa 1 calaamadda geeska bidix ee kore. Taasi waa sawirka ay taxanaheennu ku bilaabmayaan.
In geeska midig ee hoose wuxuu yeelan doonaa lambar, kaas oo tilmaamaya inta jeer ee sanduuqani ka muuqan doono taxanaheena. Hadda waxaad yeelan doontaa 1 ilbiriqsi oo calaamadeysan. Waxaan gujineynaa fallaarta yar ee ku xigta iyo liiska soo baxa, waxaan dooranaa 0 ilbiriqsi.
Qeybta hoose ee sanduuqa wadahadalka aaladda Timeline, waxaa jira ciyaaryahan iyo xulashooyin kale oo badan. Waxaa jira mid yar oo laba jibbaaran oo leh gees gees ah. Midig ugu dhow qashinka. Qalabkaasi waa Nuqul kaamerada la xushay. Waxaan si sax ah ugu gujineynaa iyada lambarada meertada 1.
Hadda waxaan aadeynaa Daaqadaha lakabyada oo dhaqaajiso muuqaalka lakabyada Milton iyo Sandwich.
Waxaan aadeynaa qaabeynta lambar 2 iyo liiska waqtiga waxaan dooran karnaa 1-ilbiriqsi.
Waxaan ku laabaneynaa xulashada Jir nuqul oo waxaan nuqul ka nahay lambarka laba jibaaran 2 si loo helo lambar 3.
Laga soo bilaabo sanduuqan lambar 3 waxaan aadeynaa daaqadda lakabyada oo aan dhaqaajineynaa muujinta lakabka qoraalka ee nuxurkiisu hoos u dhacay gudaha sandwich-ka.
Waxaan u laabaneynaa Daaqada waqtiga iyo qaabka 3 waxaan u bedeleynaa waqtiga mudada 2 ilbiriqsi.
Waxaan nuqul ka sameeynaa qaabkii ugu dambeeyay markale si aan u helno nambarka 4.
Waxaan aadeynaa Daaqadaha lakabyada mar labaad oo dhaqaaji mid ka mid ah lakabyada qoraalka haray.
Dib ugulaabo daaqada Jadwalka waxaan u badaleynaa mudada 1 ilbiriqsi.
Waxaan labanlaabay markii ugu dambeysay. Lambarka 5.
Waxaan dib ugu noqoneynaa dhanka Daaqadaha lakabyada waxaanan dhaqaajineynaa lakabka qoraalka ugu dambeeya.
Waxaan u beddeleynaa muddada Saacadaha 5.
Hadda waxaan siineynaa ciyaarista ciyaaryahanka ama booska booska.
Marka aan ku faraxno natiijada, waxaan ka dhoofinaynaa Fayl-Kaydso Webka.
Waxaan haynaa faylka GIF iyo hubinta inaan ka dhoofineyno sanduuqa koowaad ee taxanaha.
Diyaar u ah in la isticmaalo calamadaada GIF.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo sameeyo banner dhaqaaqa Photoshop si fudud 2 (gabagabo)